Kuthandazelwa umsakazi olinyazwe yimoto
UHANJISELWA imikhuleko esibhedlela umsakazi weMbokodo FM uThami Ntombela Isithombe: FACEBOOK/THAMI NTOMBELA
SEBETHEMBE umkhuleko ngempilo yomsakazi obuye abe sesikhundleni kwiMbokodo FM obangwa nezibi esibhedlela ngemuva kokulimala kanzima engozini yemoto ngesikhathi esendleleni ephikelele emsebenzini.
UThami Ntombela osakaza uhlelo lwasemini Injobo Ithungelwa Ebandla, ulimale ngoMgqibelo ebusuku ngeledlule. Imithombo yeSolezwe ngeSonto engaphakathi esiteshini ithi uNtombela ungeniswe egunjini labagula kakhulu e-Addington eThekwini.
Kuthiwa bekuvalwe amehlo ngesikhathi efika ngoba isimo sakhe besisibi.
Kuthiwa akwaziwa noma ushayisane nenye imoto noma igingqikile njengoba kuthiwa watholwa abezimo eziphuthumayo elimele.
Nabo bamthatha bamshova esibhedlela ngoba bebona ukuthi isimo sakhe sinzima.
UMphathisiteshi weMbokodo FM, uSandile Ngema, ukuqinisekisile ukuthi babeke uNtombela emkhulekweni emuva kokuba sengozini. Kuthiwa ubesuka edolobheni ehamba ngemoto yesiteshi kade eyolungisa okuthile. “Ubuye asebenze kwezobuxhakaxhaka ikakhulukazi uma sizosakaza ngaphandle uyena osuke ezosebenza zonke izinto zakhona. Sithole umbiko wokuthi ulimale emgwaqeni uM19 ebusuku kodwa imininingwane eminingi ayicaci kahle.”
Uthe ozakwabo basesiteshini bayile ukuyombheka esibhedlela bathola ukuthi nokho useyalulama akusekubi kakhulu. Ukulimala kukaNtombela kusigqeme ingozi engeqiwa ntwala isiteshi ngoba ubamba imisebenzi eyehlukene.
UNgema uthe abalaleli bangathuki kodwa bambeke emkhulekweni uNtombela ukuze alulame abuyele ohlelweni okuthiwa luthandwa kakhulu.
Uhlelo lukaNtombela lungena kusuke ngo-12 kuya ku-3 nsukuzonke futhi lugxile ekusizeni ukusombulula izinkinga zabantu.
UNgema uthe bewumsakazo basazama ukuthola kahle ukuthi ngabe kwenzekani ngobusuku bengozi.